LG G2 VS HTC Desire 816, tijaabada xawaaraha Androidsis | Androidsis
Waxaan ku sii wadaynaa waxyaabaha gaarka ah Imtixaanka xawaaraha Androidsis, taas oo ka fog falanqaynta ama tijaabooyinka farsamada, waxaan dooneynaa inaan hubino howlgalka labo terminaal oo midba midka kale wajahayo isticmaalka ugu badan ee adeegsade kasta oo ka mid ah nidaamka qalliinka ee robotka cagaaran uu ku siin karo maalinba maalinta ka dambaysa. Tijaabooyinka qaarkood oo aan ku furayno codsiyo kala duwan oo isticmaalka guud u ah isticmaalaha guud ee Android, isla mar ahaantaana ku jira laba terminaal oo kala duwan iyo qeexitaanno farsamo oo kala duwan, si loo hubiyo haddii uu jiro farqi u dhexeeya iyaga sida jaleecada hore iyo warqadda waxay u muuqdaan inay leeyihiin.
Imtixaanka xawaaraha Androidsis, maanta waxaan ku faraxsanahay inaan wajahno LG G2 VS HTC Rabitaan 816, laba terminaal oo wajahay Nexus 6 natiijooyinkuna aad iyo aad ayey ugu fiicnaayeen labadaba. Gudaha xiriiriyahan waxaan kaaga tagayaa iska horimaadka u dhexeeya LG G2 VS Nexus 6 iyo kan kale iska hor imaadka u dhexeeya Nexus 6 VS HTC Desire 816.
Sideed indhahaaga wax ugu arki kartaa, xitaa adigoo wajahaya labo boosteejo oo warqad noogu soo bandhigeysa qeexitaanno farsamo oo aad u kala duwan kana waxtar badan ama ka sarreeya LG G2. Xaqiiqda ama isticmaalka guud ee labada terminaal, runta ayaa ah inaan dhihi karno taas Ma jiro faraq aad u badan oo u dhexeeya labada terminaal , iyo xitaa xitaa xawaaraha xawaaraha, HTC Desire 816 wuxuu siinayaa LG G2 dib-u-eegista mararka qaarkood.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa la dhihi karaa waxaan la kulannaa labo terminaal oo aad u waaweyn oo Android ah iyo laba ikhtiyaar oo aad u wanaagsan oo loogu talagalay dhammaan kuwa raadinaya casriga wanaagsan ee Android xilligan kirismaska inaad naftaada siiso ama aad wax siiso kuwa aad jeceshahay.
Waa kuwan fiidiyowyada ku jira, sida aan ku sheegay bilowga qoraalkan, labada terminaalba waxay la kulmeen awoodda Motorola Nexus 6 oo labaduba way ka gudbeen tijaabada xawaaraha Androidsis oo leh dhibco badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » Imtixaanka xawaaraha Androidsis; Maanta, LG G2 VS HTC Desire 816
Viber wuxuu galaa adduunka ciyaaraha fiidiyowga ee qalabka mobilada